May 2016 - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Bangkok Traffic Love Story (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
IMDb Rating (7.3/10) ထိရရှိထားတဲ့ Comedy , Romance အမျိုးအစား ထိုင်းဇာတ်ကားလေးပါ။ မင်းသမီး Cris Horwang ကိုအထူးသတိထားမိမယ့်ဇာတ်ကားဖြ...
Bangkok Traffic Love Story (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 5:01 PM Rating:5IMDb Rating (7.3/10) ထိရရှိထားတဲ့ Comedy , Romance အမျိုးအစား ထိုင်းဇာတ်ကားလေးပါ။ မင်းသမီး Cris Horwang ကိုအထူးသတိထားမိမယ့်ဇာတ်ကားဖြ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 5:01 PM No comments:
မြန်မာ့ရိုးရာဂီတရဲ့သမိုင်းမှာ အထင်အရှားဖြစ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းအပုဒ်တစ်ထောင်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဖြန့်ချိမယ့် ဂီတမှူး ဓီရာမိုရ်
လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီး တူရိယာတစ်ခုခုကို စတင်တီးခတ်ဖို့ သင်ကြားတော့မယ်ဆိုရင် မြန်မာ့ရိုးရာတူရိယာထက် အနောက်တိုင်းတူရိယာတွေ...
မြန်မာ့ရိုးရာဂီတရဲ့သမိုင်းမှာ အထင်အရှားဖြစ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းအပုဒ်တစ်ထောင်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဖြန့်ချိမယ့် ဂီတမှူး ဓီရာမိုရ် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:09 PM Rating:5လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီး တူရိယာတစ်ခုခုကို စတင်တီးခတ်ဖို့ သင်ကြားတော့မယ်ဆိုရင် မြန်မာ့ရိုးရာတူရိယာထက် အနောက်တိုင်းတူရိယာတွေ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 10:09 PM No comments:
Innocent Thing (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး (18+)
IMDb Rating (6.4/10) ရရှိထားတဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်ကားပါ။ ပညာပေးဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး အချစ်ကိုရူးမိုက်တဲ့လူတွေအကြောင်းရိုက်ကူးပြထ...
Innocent Thing (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး (18+) Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:40 PM Rating:5IMDb Rating (6.4/10) ရရှိထားတဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်ကားပါ။ ပညာပေးဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး အချစ်ကိုရူးမိုက်တဲ့လူတွေအကြောင်းရိုက်ကူးပြထ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:40 PM No comments:
The Restless (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး
တော်ဝင်မိသားစုတွေဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်စီးလာပြီး တိုင်းပြည်ဟာပျက်ယွင်းလာခဲ့တဲ့ မင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကို ရောက်လာခဲ့တယ် မင်းကျင့်တရားပ...
The Restless (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:16 PM Rating:5တော်ဝင်မိသားစုတွေဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်စီးလာပြီး တိုင်းပြည်ဟာပျက်ယွင်းလာခဲ့တဲ့ မင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကို ရောက်လာခဲ့တယ် မင်းကျင့်တရားပ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:16 PM No comments:
ဟက်ပြီးသား D-Day Game data file မလို
ကျွန်တော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းအပါအဝင် တခြားသူတွေပါ ဂိမ်းသူခိုးဆော့ဝဲလ် အတောင်းများလာပါတယ် ကျွန်တော်က ဘယ်ဂိမ်းကိုဟက်မလို့လဲလို့ ပြန်မေးလိုက်ရင်...
ဟက်ပြီးသား D-Day Game data file မလို Reviewed by Unknown on 5:54 PM Rating:5ကျွန်တော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းအပါအဝင် တခြားသူတွေပါ ဂိမ်းသူခိုးဆော့ဝဲလ် အတောင်းများလာပါတယ် ကျွန်တော်က ဘယ်ဂိမ်းကိုဟက်မလို့လဲလို့ ပြန်မေးလိုက်ရင်...
Unknown at 5:54 PM No comments:
မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ပြုလုပ်မယ့် လူငယ်ဟစ်ဟော့ပ် ဖျော်ဖြေပွဲ
လူငယ်ဟစ်ဟော့ပ် အဆိုရှင်များပါဝင်မည့် ဖျော်ဖြေပွဲကို မေလ ၂၈ ရက်ညတွင် မျှော်စင်ကျွန်း၌ ပြု လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဘိုဘိုအန်တာတိန့်မန့်မှ ကိ...
မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ပြုလုပ်မယ့် လူငယ်ဟစ်ဟော့ပ် ဖျော်ဖြေပွဲ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:16 PM Rating:5လူငယ်ဟစ်ဟော့ပ် အဆိုရှင်များပါဝင်မည့် ဖျော်ဖြေပွဲကို မေလ ၂၈ ရက်ညတွင် မျှော်စင်ကျွန်း၌ ပြု လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဘိုဘိုအန်တာတိန့်မန့်မှ ကိ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 10:16 PM No comments:
ကိုရီးယားနာမည်ကြီး Sister အဖွဲ့နှင့် K-Pop များပါဝင်ဖျော်ဖြေမည့် ဂီတပွဲကို Free Show အဖြစ် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းဖျော်...
Sister အဖွဲ့၏ ဂီတပွဲကို Free Show အဖြစ် ကျင်းပမည် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:12 PM Rating:5ကိုရီးယားနာမည်ကြီး Sister အဖွဲ့နှင့် K-Pop များပါဝင်ဖျော်ဖြေမည့် ဂီတပွဲကို Free Show အဖြစ် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းဖျော်...
ယခုနှစ်အတွင်း ပြောင်းလဲခြင်းများ MTVထွက်ရှိနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ မျိုးကြီး
လတ်တလောတွင် သီချင်းများသီဆိုနေသည်သာမက ကြော်ငြာများကိုပါ ရိုက်ကူးလျက်ရှိသည့် အဆိုတော်မျိုးကြီးက သူ၏ ပြောင်းလဲခြင်းများ MTV အား ယခုနှစ်...
ယခုနှစ်အတွင်း ပြောင်းလဲခြင်းများ MTVထွက်ရှိနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ မျိုးကြီး Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:09 PM Rating:5လတ်တလောတွင် သီချင်းများသီဆိုနေသည်သာမက ကြော်ငြာများကိုပါ ရိုက်ကူးလျက်ရှိသည့် အဆိုတော်မျိုးကြီးက သူ၏ ပြောင်းလဲခြင်းများ MTV အား ယခုနှစ်...
မြန်မာဂီတပွဲတော် (Myanmar Music Festival 2016) ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် မေလ ၂၈ ရက်မှ ဇွန် ၁၄ ရက်အထိ ပြည်ပဂီတနယ်ပယအသီးသီးမှ ပညာရှင်များ လာေ...
နှစ်ပတ်ကျော်ကြာမြင့်မည့် မြန်မာဂီတပွဲတော်ကို ပြည်ပ ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းကျင်းပမည် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:58 PM Rating:5မြန်မာဂီတပွဲတော် (Myanmar Music Festival 2016) ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် မေလ ၂၈ ရက်မှ ဇွန် ၁၄ ရက်အထိ ပြည်ပဂီတနယ်ပယအသီးသီးမှ ပညာရှင်များ လာေ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:58 PM No comments:
အိန္ဒိယမှ Rock တေးဂီတအဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်ဖျော်ဖြေမည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် Festival of India 2016 ပွဲသို့ အိန္ဒိယမှ ရော့ခ်တေးဂီတအဖွဲ့ လာရောက် ဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်ကြောင်း The Northeast To...
အိန္ဒိယမှ Rock တေးဂီတအဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်ဖျော်ဖြေမည် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:52 PM Rating:5မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် Festival of India 2016 ပွဲသို့ အိန္ဒိယမှ ရော့ခ်တေးဂီတအဖွဲ့ လာရောက် ဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်ကြောင်း The Northeast To...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:52 PM No comments:
RAM 3GB နဲ့ 4000mAh ဘက်ထရီပါတဲ့ Panasonic Eluga A2 တန်ဖိုးနည်းစမတ်ဖုန်း ထွက်ရှိ
တန်ဖိုးနည်းစမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ အိန္ဒိယမှာနာမည်ရနေတဲ့ Panasonic ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့တုန်းက Eluga A2 ဆိုတဲ့ တန်ဖိုးနည်းစမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်...
RAM 3GB နဲ့ 4000mAh ဘက်ထရီပါတဲ့ Panasonic Eluga A2 တန်ဖိုးနည်းစမတ်ဖုန်း ထွက်ရှိ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:39 AM Rating:5တန်ဖိုးနည်းစမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ အိန္ဒိယမှာနာမည်ရနေတဲ့ Panasonic ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့တုန်းက Eluga A2 ဆိုတဲ့ တန်ဖိုးနည်းစမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:39 AM No comments:
ဖုန်းမှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် wallpaper တွေ အရမ်းများနေလို့၊ ဘာတင်ထားရမှန်းမသိ ဖြစ်နေပါသလား။ Wallpaper တစ်ခုထဲမတင်ထားဘဲ၊ တစ်ခုပြီးတစ်ခု အ...
Android ဖုန်းမှာ wallpaper ပုံတွေ အလိုလိုပြောင်းနေအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:32 AM Rating:5ဖုန်းမှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် wallpaper တွေ အရမ်းများနေလို့၊ ဘာတင်ထားရမှန်းမသိ ဖြစ်နေပါသလား။ Wallpaper တစ်ခုထဲမတင်ထားဘဲ၊ တစ်ခုပြီးတစ်ခု အ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:32 AM No comments:
အတ္တလန်တစ်သမုဒ္ဒရာအောက်ကနေ ဧရာမဖိုင်ဘာအင်တာနက်ကေဘယ်တစ်ခု တည်ဆောက်သွားမယ့် Facebook နဲ့ Microsoft
Facebook Inc. နဲ့ Microsoft Corp. တို့ပူးပေါင်းကာ ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ကေဘယ်ကြိုးတစ်ခုကို အတ္တလန်တစ်သမုဒ္ဒရာဖြတ်ပြီး တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ကြေ...
အတ္တလန်တစ်သမုဒ္ဒရာအောက်ကနေ ဧရာမဖိုင်ဘာအင်တာနက်ကေဘယ်တစ်ခု တည်ဆောက်သွားမယ့် Facebook နဲ့ Microsoft Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:24 AM Rating:5Facebook Inc. နဲ့ Microsoft Corp. တို့ပူးပေါင်းကာ ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ကေဘယ်ကြိုးတစ်ခုကို အတ္တလန်တစ်သမုဒ္ဒရာဖြတ်ပြီး တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ကြေ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:24 AM No comments:
ကိုယ့်ဖုန်းထဲက font ကို ကိုယ့်လက်ရေးအတိုင်း ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
Android ကို ချစ်ရတဲ့အချက်တွေထဲမှာ ဖုန်းကို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျနီးပါးပြင်ဆင်နိုင်၊ ကလိနိုင်တဲ့ အချက်ကလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ပါ။ဒါနဲ့ ကိုယ့်ဖု...
ကိုယ့်ဖုန်းထဲက font ကို ကိုယ့်လက်ရေးအတိုင်း ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:18 AM Rating:5Android ကို ချစ်ရတဲ့အချက်တွေထဲမှာ ဖုန်းကို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျနီးပါးပြင်ဆင်နိုင်၊ ကလိနိုင်တဲ့ အချက်ကလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ပါ။ဒါနဲ့ ကိုယ့်ဖု...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:18 AM No comments:
ကွန်ပျူတာသမားများအတွက် PC အတွက် Viber Up Date လေးနဲ့ မြန်မာစာအမှန်
Viber ကို PC မှာ အသုံးပြုလိုသူများအတွက် Update လေးနဲ့ Viber Myanmar စာအမှန် ကိုပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Viber ဆိုရင် အားလုံးသိပီးသားဖြစ်တဲ့အတ...
ကွန်ပျူတာသမားများအတွက် PC အတွက် Viber Up Date လေးနဲ့ မြန်မာစာအမှန် Reviewed by Unknown on 9:31 PM Rating:5Viber ကို PC မှာ အသုံးပြုလိုသူများအတွက် Update လေးနဲ့ Viber Myanmar စာအမှန် ကိုပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Viber ဆိုရင် အားလုံးသိပီးသားဖြစ်တဲ့အတ...
Unknown at 9:31 PM No comments:
နည်းပညာကို စိတ်ဝင်စားသူ / လေ့လာနေသူ ညီကိုမောင်နှမ များအတွက် ကိုအာကာ Blog app
နည်းပညာကို စိတ်ဝင်စားသူ / လေ့လာနေသူ ညီကိုမောင်နှမ များအတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုအာကာနည်းပညာဘလော့ လေးကို Android Application လေးအဖြ...
နည်းပညာကို စိတ်ဝင်စားသူ / လေ့လာနေသူ ညီကိုမောင်နှမ များအတွက် ကိုအာကာ Blog app Reviewed by Unknown on 3:55 PM Rating:5နည်းပညာကို စိတ်ဝင်စားသူ / လေ့လာနေသူ ညီကိုမောင်နှမ များအတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုအာကာနည်းပညာဘလော့ လေးကို Android Application လေးအဖြ...
Unknown at 3:55 PM No comments:
Sony Camera မှာပါဝင်တဲ့ Stickers ထက် Stickers မျက်နှာဖုံးအမိုက်အစား အလန်းလေးတွေအစုံပါရှိတဲ့ LINE Camera: Animated Stickers APK
၅ လပိုင်း ၂၅ ရက် နေ့မှာထွက်ရှိလာ Android / Tablet ဖုန်းတွေမှာ LINE Camera: Animated Stickers v12.2.0 Apk အသ...
Sony Camera မှာပါဝင်တဲ့ Stickers ထက် Stickers မျက်နှာဖုံးအမိုက်အစား အလန်းလေးတွေအစုံပါရှိတဲ့ LINE Camera: Animated Stickers APK Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:58 PM Rating:5၅ လပိုင်း ၂၅ ရက် နေ့မှာထွက်ရှိလာ Android / Tablet ဖုန်းတွေမှာ LINE Camera: Animated Stickers v12.2.0 Apk အသ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 10:58 PM No comments:
ကလေးတို့ လေ့လာရန် အသင့်တော်ဆုံး "စပ်စပ်စုစု" Apk
သင်ယူစရာ ကစားစရာ အများကြီးနဲ့ အကောင်လေးတွေရဲ့ အသံ အရောင်လေးတွေလည်း သင်လို့ရ ဥာဏ်စမ်းဂိမ်းလေးတွေ ကလေးများ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေ့...
ကလေးတို့ လေ့လာရန် အသင့်တော်ဆုံး "စပ်စပ်စုစု" Apk Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:27 PM Rating:5သင်ယူစရာ ကစားစရာ အများကြီးနဲ့ အကောင်လေးတွေရဲ့ အသံ အရောင်လေးတွေလည်း သင်လို့ရ ဥာဏ်စမ်းဂိမ်းလေးတွေ ကလေးများ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေ့...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:27 PM No comments:
The Man From MACAU3(2016)မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ ထွေထွေထူးထူး မိတ်ဆက်မပေးတော့ပါဘူး မင်းသားကြီး Chow Yun Fat ရဲ့ နာမည်ကျော်ဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ The Man from Macau ရဲ့ တတိယ...
The Man From MACAU3(2016)မြန်မာစာတန်းထိုး Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:35 PM Rating:5ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ ထွေထွေထူးထူး မိတ်ဆက်မပေးတော့ပါဘူး မင်းသားကြီး Chow Yun Fat ရဲ့ နာမည်ကျော်ဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ The Man from Macau ရဲ့ တတိယ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 7:35 PM No comments:
The Jungle Book (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
May5မှာကျရောက်တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် ကျနော့်ညီလေးအေးချမ်း က မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးတဲ့ Adventure, Drama, Family အမျိုးအစ...
The Jungle Book (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:29 PM Rating:5May5မှာကျရောက်တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် ကျနော့်ညီလေးအေးချမ်း က မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးတဲ့ Adventure, Drama, Family အမျိုးအစ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 7:29 PM No comments:
မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ထက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားမှာ နတ်ဘုရား Horus နဲ့ Set တို့ထီးနန်းလုရင်း စွမ်းအားချင်းယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့ကားပါ ...
Gods of Egypt (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:18 PM Rating:5မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ထက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားမှာ နတ်ဘုရား Horus နဲ့ Set တို့ထီးနန်းလုရင်း စွမ်းအားချင်းယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့ကားပါ ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 7:18 PM No comments:
Digital Life ဂျာနယ်
Digital Life Journal Issue Vol-5 ၊ Issue4(23.5.16)
Digital Life ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် တင်္နလာနေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Digital Life ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နြေ...
Digital Life Journal Issue Vol-5 ၊ Issue4(23.5.16) Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:20 PM Rating:5Digital Life ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် တင်္နလာနေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Digital Life ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နြေ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 10:20 PM No comments:
Sony Xperia Z5 Premium ကတော့ ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားတွေထဲမှာ ပါဝင်နေပြီး Nano-SIM အသုံြး...
Sony Xperia Z5 Premium Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:09 PM Rating:5Sony Xperia Z5 Premium ကတော့ ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားတွေထဲမှာ ပါဝင်နေပြီး Nano-SIM အသုံြး...